Chiremera - Magnesium L-Threonate Supplements: Bhenefiti, Dosage
musha > Magnesium L-Threonate Zvishandiso
Kana uri kutsvaga zvakanaka Magnesium L-Threonate inowedzera, tinokurudzira kutenga iyo Magnesium Threonate poda kubva kuCofttek. Iyo kambani inotaura kuti inosimudzira iyo bioavailability ye magnesium kumuviri. Iyo kambani zvakare inotaura kuti hupfu hwakapihwa nekambani inotsigira ndangariro basa uye inowedzera kugona kwese kwekuziva Ivo zvakare vanobatsira vashandisi kurara zvirinani. Cofttek ndeye Magnesium L-Threonate vatengesi vanozokutengesa iwe zvakanyanya kushanda zvinogadzirwa.
Chii chinonzi Magnesium L-Threonate?
Chii chinonzi magnesium L Threonate inoshandiswa?
Iko magnesium Threonate irinani?
Iyo magnesium Glycinate iri nani pane mag nesium citrate?
Ndeapi mishonga yausingafanire kutora ne magnesium?
Ko magnesium inogadzira tsvina here?
Mangani mg we magnesium L Threonate yandinofanira kutora?
Ndeipi Magnesium yakanyanya kunetsekana?
Ko magnesium ingabatsire nehuropi fog?
Ko magnesium inoporesa uropi here?
Ko magnesium inokonzera kuora mwoyo here?
Iko magnesium L inodonhedza yakanakira BP?
Ndeipi yakanakisa magnesium yekutora zuva nezuva?
Ndeupi musiyano uripo pakati pemagnesium citrate uye magnesium gluconate?
Ndeipi Magnesium yakanakira mhasuru cramp?
Magnesium yakanaka pakunetseka?
Ndeipi Magnesium inonyanya kurara?
Ndezvipi zvinhu zvekudya zvakakwirira mu magnesium?
Ndeipi mhedzisiro yakareba yekutora magnesium?
Yese magnesium inokonzera manyoka here?
Inguva yakareba sei iyo magnesium L Inotora kutora kushanda?
Ko magnesium inokonzera Alzheimer's?
Ndezvipi zviratidzo zveiyo yakaderera magnesium?
Ko vhitamini D inogona kudzivirira Alzheimer's?
Ndeipi Magnesium yakanakira tsinga?
Zviri nani kutora magnesium mangwanani kana husiku?
Iko Magnesium Yakanaka kune dzakapinza tsinga?
Ko magnesium inogona kubatsira kudedera?
Magnesium yakanaka kuParkinson's?
Ndezvipi zviratidzo zveiyo yakaderera magnesium mumuviri?
Turmeric inobatsira chirwere chePasinson here?
Chii chinowedzera chirwere chePalinson?
Ko magnesium inobata ndangariro here?
Magnesium inobatsira neoksijeni here?
Ko magnesium inowedzera serotonin?
Ko magnesium inopa simba here?
Ndeipi yakanakisa magnesium L Threonate?
Nei magnesium glycinate zvirinani?
Iko magnesium Glycinate yakafanana nemagnesium?
Ko magnesium Glycinate inobatsira iwe poop?
Chii chinonzi magnesium glycinate inoshandiswa kurapa?
Chii chausingafanire kutora ne magnesium?
Iwe haufanire kutora magnesium riini?
Ndinoziva sei kana ini ndakaderera pane magnesium?
Inguva yakareba sei ndisati ndarara ndinofanira kutora magnesium?
Ndeapi mavitamini ausingafanire kutora pamwechete?
Iko magnesium L inodonhedza yakanaka kune kushushikana?
Ndeupi mhando yemagesium inonyanya kufarirwa?
Ndinogona here kutora magnesium kwenguva yakareba?
Ko magnesium inobata sei ura kufamba?
Kangani pazuva zvaunofanira kutora magnesium?
Ndeipi nzira yepamusoro yekutora magnesium?
Nei Tichida Magnesium L-Threonate?
Chii chinonzi Magnesium L-threonate Side Mhedzisiro?
Ndeapi mabhenefiti eMagnesium L-threonate?
Ndekupi kwandinogona kutenga magnesium L Threonate?
Ko calcium uye magnesium inofanirwa kutorwa pamwechete here kana zvakasiyana?
Threonic acid ikomboni inogadziriswa nemvura yakawanikwa kubva mukuparara kwemagetsi kweVitamin C. Kana threonic acid ichibatana ne magnesium, inogadzira munyu unonzi Magnesium L-threonate. Magnesium L-inotyisa inobatwa nyore nemuviri uye nekudaro, ndiyo imwe yenzira dzinoshanda kwazvo dzekuita kuti magnesium isvike maseru ehuropi uye zvimwe zvikamu zvemuviri. Iyo magnesium yakapihwa neMagnesium L-threonate inoshanda akawanda akakosha biochemical mabasa, anosanganisira kumisikidza B mavitamini, insulin secretion, ATP kuumbwa uye mapuroteni uye mafuta acid kuumbwa. Iyo mineral inoitawo basa rakakosha mukufambisa kushanda kwakanaka kwema enzymes akati wandei. Kunyanya kukosha, inowedzera mashandiro ezvirwere zvemuviri nekuwedzera iyo anti-hutachiona uye inorwisa-bundu mhedzisiro yemaseru anouraya maseru uye cytotoxic T-lymphocyte.
Sezvambotaurwa, magnesium inogona kuwanikwa kuburikidza nezvikafu zvakati wandei zvakapfuma muicherwa. Zvimwe zvekudya zvine magnesium muhuwandu hwakawanda chokoreti yakasviba, makotapeya, nzungu, bhinzi, tofu, manhanga uye mbeu dzechia, hove dzakakora, nezvimwewo Zvisinei, magnesium inopihwa kuburikidza nezvisikwa hazviwanzo kukwana zvakakwana kuchengetedza akasiyana biochemical mashandiro uye iri, nokudaro, kuti kudiwa kweMagnesium L-threonate zvinowedzera zvakawedzera zvakanyanya mumakore mashoma apfuura.
Inoremekedzwa dhatabhesi kubva kuNational Institutes of Health
Magnesium L-Threonate inobatsira mukugadzirisa kusagadzikana kwehuropi. Mushonga uyu unowedzera kuwanda kwemagnesium mumaseru ehuropi.
Kutenga Magnesium L-Threonate ndeye ayo nootropic mabhenefiti. Inosimudzira episodic ndangariro, kudzidza, uye kuwedzera kusimbisa. Iyo yekuwedzera idhizaini yekurapa kuvarwere vanorwara nezera-rakanangana nekurasikirwa ndangariro, ADHD, kuora mwoyo, uye chirwere cheAlzheimer.
The chikuru anobatsirasyeMagnesium L-Threonate iko kugadzirisa mundangariro. Iyo inokwanisa kusimudzira synaptic density uye mapurasitiki pamwe nekuwedzera huwandu hwakazara hweeurotransmitter ekuburitsa masaiti mukati mehuropi.
Ichi chekuwedzera chinokwanisa zvakare kugadzirisa nzvimbo yekuyeuka. Mune imwe gonzo yekudzidza, kushanda ndangariro kwakagadziridzwa ne13% mushure memazuva makumi maviri nemaviri ekutora Magneisum L-Threonate. Mushure memazuva makumi matatu ekuwedzera, makonzo akura aikwanisa kuita padanho rakaenzana nevamwe vavo vadiki.
Izvi zvinoreva kuti nepo ichi chekuwedzera chichikwanisa kusimudzira kugona kwekuziva mune zvese zvevechidiki uye zvekare zvidzidzo, zvakavandudza zvakanyanya kune vakwegura. Muchokwadi, makonzo akura akaona yekuvandudza mwero we19%, izvo zvakakosha kana zvichienzaniswa ne13% yekuvandudza mumakonzo madiki. Tichifunga kuti vanhu vakura vanowanzo shungurudzwa nekurasikirwa nendangariro, ichi chinowedzera chinotakura zvine simba kune vanhu vakwegura.
Magnesium L-threonate inogona kunge iri yakakodzera magnesium fomu kwauri kana iwe uri kutsvaga kusimudzira hutano hwehuropi kunyanya. Kunyangwe ichigona kuwedzera huwandu hwemagesium mumuviri wese, mhedzisiro inogona kutosimba muuropi neiyi fomu yemagesium.
Kunyange paine mhando dzakawanda dzemagnesium inowanikwa, isu tinowanzofarira kushandisa magnesium citrate uye / kana magnesium glycinate. Magnesium citrate inobatsira zvakanyanya kune vanhu vanotambura nekuzvimbirwa, nepo iyo glycinate fomu ichinyanya kubatsira kune mamiriro senge kushushikana, kushaya hope, kushushikana kusingaperi, uye mamiriro ekuzvimba.
Kutora magnesium nemishonga iyi kunogona kukonzera kukanganiswa kweropa kuenda pasi zvakanyanya. Mimwe yemishonga iyi inosanganisira nifedipine (Adalat, Procardia), verapamil (Calan, Isoptin, Verelan), diltiazem (Cardizem), isradipine (DynaCirc), felodipine (Plendil), amlodipine (Norvasc), nezvimwe.
Stool Softener: Magnesium inokwevera mvura kupinda mumatumbu, ichishanda seosmotic laxative. Uku kuwedzera kwemvura kunokurudzira ura motility. Iyo zvakare inorerutsa uye inowedzera saizi yechigaro, zvichikonzera kufamba kwembambo uye kubatsira kugadzira zvituru zviri nyore kupfuura.
Magnesium L-threonate chinodhaka chemumuromo uye chinogona kutorwa chero muchimiro chemapiritsi kana hupfu. Muyero wakakodzera weMagnesium L-threonate kana mushonga zvinoenderana nezera uye hutano hwemunhu ari kutora pamwe nechinangwa icho mushonga wacho urikutorwa. Kazhinji, vakadzi vane makore ari pakati pegumi nemapfumbamwe kusvika makumi matatu vanokurudzirwa kunamatira padosi ye19 mg pazuva uye varume vezera rimwe chete vanofanirwa kunamatira pamuganhu we30 mg pazuva. Varume vakuru vanogona kuwedzera dosi yavo kusvika ku310 mg pazuva uye vakadzi vari muboka rezera iro vanofanirwa kudya 400 mg yeMagnesium L-threonate zuva rega rega kuti zvive nemhedzisiro. Vakadzi vanoyamwisa vanogona zvakare kushandisa ichi chinwiwa. Nekudaro, ivo vanofanirwa kuchengeta kudya kwavo kwemazuva ese kweMagnesium L-threonate isingasvike 420 mg pazuva.
Kana iwe uri kutora Magnesium L-threonate kune yakatarwa mamiriro, iwe uchafanirwa kugadzirisa yako dosage zvichibva pachinangwa icho mushonga uri kutorwa. Semuenzaniso, kana iwe uri kutora Magnesium L-threonate yezvinhu zvine chekuita nekugaya, unokurudzirwa kutora 400-1200 mg zuva rega rega. Kana iwe uri kutora iyo yekuwedzera kuwedzera basa rekuziva, iwe unofanirwa kudya 1000 mg yeMagnesium L-threonate zuva rega rega. Kuti uve nekurara kwakanaka, 400-420 mg yeMagnesium L-threonate yakakwanira kune varume uye 310 kusvika 360 mg yakakwana kune vakadzi.
Magnesium inowanzo sungwa kune zvimwe zvinhu kuitira kuti zvive nyore kuti muviri uutore. Mhando dzakasiyana dzemagnesium dzakakamurwa zvichienderana nezvinhu izvi zvekubatanidza. Mhando dzakasiyana dzemagnesium dzinosanganisira:
Magnesium glycinate. Kazhinji inoshandiswa kudzikisa kurwadziwa kwemhasuru.
Magnesium oxide. Inowanzo shandiswa kurapa migraines uye kupatira.
Magnesium citrate. Inonyorerwa nemuviri uye zvakare inoshandiswa kurapa kupatira.
Magnesium chloride. Inonyorerwa nemuviri. S
Magnesium sulfate (Epsom munyu). Kazhinji, isinganetsi nyore nemuviri asi inogona kupinzwa kuburikidza neganda.
Magnesium lactate. Kazhinji inoshandiswa sekuwedzera chikafu.
Zvinoenderana neongororo ya2017 yezvidzidzo, dzakawanda zvezvidzidzo zvinoenderana nemagesium uye kushushikana zvinoshandisa magnesium lactate kana magnesium oxide. Magnesium glycinate inobatwa nyore uye inogona kudzikamisa zvinhu. Zvinogona kubatsira kudzikisa kushushikana, kushushikana, kushushikana, uye kushaya hope. Asi, humbowo hwesaenzi pane izvi zvinoshandiswa hushoma, saka zvimwe zvidzidzo zvinodiwa. Magnesium glycinate inowanzo shandiswa kune ayo kudzikamisa mhedzisiro yekurapa kushushikana, kushushikana, uye kushaya hope.
Inowanzo kunzi hutsi hwehuropi, kunonoka kuziva kana kunetsekana nekufungisisa uye ndangariro zvese zvinogona kuratidza kushomeka kwemagesium Magnesium chinhu chinovaka muviri chakakosha kuuropi, saka pasina iyo uropi haugone kuita futi.
Magnesium inoshanda semuchengeti wesuo weNMDA receptors, ayo anobatanidzwa mukukudziridza huropi hwakanaka, ndangariro nekudzidza. Iyo inodzivirira maseru etsinga kubva mukuwedzeredzwa, ayo anogona kuvauraya uye anogona kukonzera kukuvara kwehuropi.
Chidzidzo chitsva chakaburitswa mumagazini Neurology chinoratidza kuti ese ari maviri akakwirira uye akaderera kwazvo mazinga emagesium anogona kuisa vanhu panjodzi yekuva nedementia.
Rudzi urwu rwemagniziyamu runogona kupinda muropa uye ndokuyambuka chipingaidzo chako cheuropi, runopindwa muropa nemasero uye rwakaratidzirwa kudzikisa BP uye rova ​​sitiroko zvakare.
Magnesium citrate ndeimwe yeanowanzojairika magnesium mafomati uye anogona kutengwa zviri nyore pamhepo kana muzvitoro pasirese. Kumwe kutsvagurudza kunoratidza kuti mhando iyi iri pakati penzira dzisingawanikwe zvakanyanya nemagnesium, zvichireva kuti iri nyore kupinza mudumbu rako pane mamwe mafomu.
Magnesium citrate inobatsira zvakanyanya kune vanhu vanotambura nekuzvimbirwa, nepo iyo glycinate fomu ichinyanya kubatsira kune mamiriro senge kushushikana, kushaya hope, kushushikana kusingaperi, uye mamiriro ekuzvimba.
Magnesium citrate inogona kunge iri mhando inoshanda zvakanyanya kana iwe uchida kuyedza yekuwedzera. Kana iwe uine magnesium isipo, panogona kunge paine zvimwe zvakanaka kubva mukuwedzera kudya kwako kweino muviri. Uye mimwe mishonga inowanikwa yekumomesa gumbo iyo inogona kubatsira.
Kutsvakurudza kunoratidza kuti kutora magnesium yekuzvidya mwoyo kunogona kushanda nemazvo. Zvidzidzo zvakaona kuti manzwiro ekutya uye kutya anogona kuderedzwa zvakanyanya nekuwedzera kwemagesium, uye nhau dzakanaka ndedzekuti mhedzisiro haina kuganhurirwa kune yakajairwa kunetseka kusagadzikana.
Magnesium glycinate inowanzo shandiswa seyakazvimiririra yekudya yekuwedzera kuvandudza kurara uye kurapa akasiyana mamiriro ekuputira, kusanganisira chirwere chemoyo neshuga. Magnesium glycinate inobatwa nyore uye inogona kudzikamisa zvinhu. Zvinogona kubatsira kudzikisa kushushikana, kushushikana, kushushikana, uye kushaya hope.
Kunze kwekutora Magnesium L-threonate kusimudzira iwo magnesium mazinga muuropi hwako, unogona zvakare kutora mukana wezvikafu zvakapfuma mune izvi zvicherwa. Izvi zvekudya zvinogona kukubatsira iwe kuti uwane iwo anodiwa magnesium mazinga mupfungwa dzako uye unakirwe zvese zvicherwa zvinobatsira. Heano mamwe e Magnesium L-inotyisa muzvikafu;
Rima Chokoreti- chero richinaka uye riine hutano, rinotakura 64mg yemagesium inova 16% yeRDI. Kunze kwaizvozvo, rima chokoreti zvakare yakapfuma nemhangura, iron, uye manganese pamwe ne prebiotic fiber.
Avocado - uyu muchero unonaka uye unovaka muviri unogona kukupa iwe 58mg ye magnesium inova inenge 15% yeRDI. Muchero uyu zvakare wakapfuma muvhitamini B, K, uye sosi huru ye potassium.
Nutsare- anozivikanwawo kuve imwe yenzvimbo dzakanakisa dzeMagnesium L-inotyisa zvisikwa. 1-ounce rinoshandira cashews rine 82mg magnesium inova 20% yeiyo RDI.
Legumessuch- sepizi, nyemba, nhokwe, uye soya bhinzi dzakapfuma mumaminerari akasiyana, kusanganisira magnesium. Semuenzaniso, imwe kapu yebhinzi yakabikwa ine 120mg ye magnesium, uye ndiyo 30% yeiyo RDI.
Kune zvimwe zvekudya zvakaita seTofu, chia mhodzi, mhodzi dzungu, hove dzakakora, kutaura zvishoma. Bvunza wako wezvehutano kuti uwane rumwe ruzivo nezve izvi zvekudya zvine magnesium.
Magnesium chinhu chinovaka muviri icho muviri unoda kuti ugare wakagwinya. Kutora Magnesium kwenguva yakareba kwakakosha kune akawanda maitiro mumuviri, kusanganisira kudzora mhasuru uye tsinga basa, mashuga eropa, uye kuwedzerwa kweropa uye kugadzira mapuroteni, bone, uye DNA.
Mafomu e magnesium anonyanya kutaurwa kuti anokonzera manyoka anosanganisira magnesium carbonate, chloride, gluconate, uye oxide. Dhairrhea uye laxative mhedzisiro yemagesium yemagnesium inokonzerwa neiyo osmotic chiitiko chemunyu usina kubikwa mumatumbo uye mukoloni uye kukurudzira kweiyo gastric motility.
Yemumuromo yakamwiwa MgT yakaratidzirwa kutora kanenge mwedzi mumwe kusimudza huropi magnesium mazinga kusvika padanho rinodiwa kuve nemhedzisiro pakuumbwa kwendangariro.
Kuva nemagesium emagnesium akakwirira zvakanyanya kana akaderera zvakanyanya anogona kukuisa panjodzi yeAlzheimer's uye mamwe madhenda, vaDutch vanotsvaga vanotaura.
Kana iyo mwero wemagesium mumuviri uchidonha pazasi peyakajairwa, zviratidzo zvinokura nekuda kweiyo yakaderera magnesium. Zvinowanzoitika zvinokonzera low magnesium zvinosanganisira:
Zvinopisa zvinokanganisa nzvimbo hombe yemuviri
Kuwedzeredza weti (polyuria), senge mune isingadzorwe chirwere cheshuga uye panguva yekupora kubva kuakanyanya itsvo kutadza
Hyperaldosteronism (kusagadzikana uko iyo adrenal gland inoburitsa yakawandisa yehormone aldosterone muropa)
Itsvo tubule kusagadzikana
Malabsorption syndromes, senge chirwere chechiliac uye chirwere chinoputira ura
Mishonga inosanganisira amphotericin, cisplatin, cyclosporine, diuretics, proton pump inhibitors, uye aminoglycoside antibiotics
Pancreatitis (kuzvimba uye kuzvimba kwepancreas)
Mhuka uye in vitro kuyedza zvinoratidza kuti vhitamini D ine yekurapa mikana yekudzivirira uye kurapwa kwekuziva kwekuziva uye dementia. Zvidzidzo zviviri zvenguva pfupi zvichangoburwa zvinoratidza zvakare kuti yakadzika makumi maviri neshanu (OH) D mazinga anowedzera njodzi yekudzikira kwekuziva.
Iyo inogadzira inoti iyo magnesium yekuwedzera inobatsira kurwisa mhasuru aches, kugadzirisa kunaka kwekurara, uye kudzikamisa kushushikana nekushushikana. Ivo zvakare vanotsanangura kuti iyi fomu ye magnesium (magnesium bisglycinate) ine hunyoro padumbu pane mamwe mafomu emamineral.
Magnesium zvinowedzera zvinogona kutorwa chero nguva yezuva, chero bedzi uchikwanisa kuzvitora nguva dzose. Kune vamwe, kutora zvekuwedzera chinhu chekutanga mangwanani kunogona kuve kuri nyore, asi vamwe vanogona kuona kuti kuzvitora nechikafu kana kuti vasati varara kunovabatsira.
Magnesium-yakakosha mamineral ehutano system uye kudzikisa kuzvimba
Magnesium (Mg) zvinowedzera zvakaratidzirwa kunatsiridza zvakanyanya kushanda kwehutano mukusiyana kwehutano hwepfungwa. Izvo zvakakosha mabhenefiti eMg ekuwedzera mune eperipheral nerve kusagadzikana hakuna kujekeswa parizvino.
Zviratidzo zvakajairika zvekushomeka kwemagnesium zvinosanganisira mhasuru, kudedera uye kupwanya. Nekudaro, zvinowedzeredza hazvigone kudzikisa izvi zviratidzo muvanhu vasina kukwana.
Yekutanga Kudzidza kwaPasinson Inowana Magnesium Fomu Inokwanisa Kusvika Brain Inononoka mota Kuderera, Neuronal Loss
Zviratidzo zvekutanga zvemagesium epasi zvinosanganisira:
Sezvo kushomeka kwemagesium kuchikura, zviratidzo zvinogona kusanganisira:
zvisina kujairika moyo mutinhimira
Mune chidzidzo chakaburitswa muKuongorora uye Kurapa Mishonga, vaongorori vakaona kuti turmeric inogona kudzivirira huta kubva kune chepfu inobatanidzwa mukukonzeresa kudzikira kwehurongwa hwepachirwere chePasinson.
Mishonga inoshanduka, hutachiona, kushaya mvura, kushaya hope, kuvhiya kuchangobva kuitika, kushushikana, kana zvimwe zvinetso zvekurapa zvinogona kukuvadza zviratidzo zvePD. Urinary turakiti hutachiona (kunyangwe pasina chiratidzo chedundira) ndiyo inonyanya kukonzera chikonzero. ZANO: Mimwe mishonga inogona kukuvadza zviratidzo zvePD.
Chidzidzo chitsva chinoratidza kuti kuwedzera kwako kudya kwemagesium, chinhu chakakosha chicherwa chinowanikwa mune yakasviba mashizha miriwo uye mimwe michero, bhinzi, uye nzungu, zvinogona kubatsira kurwisa kupererwa kwendangariro kwakabatana nekukwegura.
Rimwe remabasa aro akakosha kubatsira kuvaka kutsungirira nekuwedzera mweya wemuviri okisijeni. Asi zvinobatsirawo ne: Hutano BP.
Tsvagiridzo inoratidza kuti kuwedzera ne magnesium kunogona kubatsira kuwedzera mazinga eserotonin. Muchokwadi, mashoma serotonin mazinga akaonekwa mune varwere vane kushomeka kwemagesium. Chidzidzo icho chakakurukura kusimudza serotonin ne magnesium chakaratidza kubudirira.
Magnesium inotamba akawanda akakosha mabasa mumuviri, senge kutsigira mhasuru uye tsinga basa uye kugadzirwa kwesimba. Low magnesium mazinga haakonzere zviratidzo munguva pfupi. Nekudaro, zvinogara zvichidzika zvakadzika zvinogona kuwedzera njodzi yekukwira kweropa, chirwere chemwoyo, mhando 2 chirwere cheshuga uye osteoporosis.
Natural Natural Huturu Hwakadzikama Gummies.
IZVO ZVOKUDYA Magnesium Citrate Veg Capsule.
Hupenyu Kuwedzera Neuro-Mag Magnesium L-Threonate.
Magtein Magnesium L-Inotyisa.
Chiremba Yakanakisa Kubvisa Kwakakwirira 100% Yakanyoroveswa Magnesium Mahwendefa.
Magnesium glycinate yakaratidzirwa kuve iine mabhenefiti akasiyana siyana, kusanganisira anotevera: Iyo inogadzikisa huropi hwako nekuda kwekuvapo kweglycine. Inogona kubatsira kubvisa kunetseka uye kukurudzira kurara zvirinani. Inobatsira kuchengetedza mapfupa akasimba nekuchengetedza hutano hwefupa.
Kune mhando dzakawanda dzemagnesium inowanikwa, isu tinowanzofarira kushandisa magnesium citrate uye / kana magnesium glycinate. Fomu yeMagnesium glycinate inobatsira zvakanyanya kune mamiriro akaita sekushushikana, kushaya hope, kushushikana kusingaperi, uye mamiriro ekuzvimba.
Magnesium glycinate ndeimwe mhando yakakura yemagnesium yekurara. Iyo ndiyo yakanyanya-kunyudzwa fomu yemagnesium, uye yakapfava padumbu, saka hazvigone kuve nemhedzisiro kana kugumbura dumbu rako.
Mushonga uyu ndeyemamineral chinowedzera kudzivirira uye kurapa yakaderera huwandu hwemagesium muropa. Mamwe marangi anoshandiswa zvakare kurapa zviratidzo zveakawandisa mudumbu asidhi senge mudumbu kugumbuka, chirungurira, uye acid indigestion.
Kunyangwe magnesium ekuwedzera anowanzoonekwa akachengeteka, iwe unofanirwa kutarisa nemubatsiri wako wezvehutano usati waatora - kunyanya kana uine chirwere. Iyo mineral yekuwedzera inogona kunge isina kuchengetedzeka kune vanhu vanotora mamwe ma diuretics, mishonga yemwoyo, kana maantibioti.
Tarisa nemubatsiri wako wehutano kana iwe uri kutora chero mushonga usati watora magnesium. Ngozi. Vanhu vane chirwere cheshuga, chirwere chemuura, chirwere chemwoyo kana chirwere cheitsvo havafanirwe kutora magnesium vasati vataura nemubatsiri wavo wehutano.
Chimwe chezviratidzo zvekutanga kushomeka kwemagesium kazhinji kuneta. Unogona kucherechedza mhasuru, kushaya simba kana kuomarara futi. Kurasikirwa kwechido uye kusvotwa zvimwe zviratidzo zvakajairika mumatangiro ekutanga. Nekudaro, iwe haugone kucherechedza chero zviratidzo zvachose pakutanga.
Kana iwe ukaronga pakushandisa magnesium ekuwedzera seyunobatsira kurara, tinokurudzira kuitora 1-2 maawa usati waenda kunorara. Funga kuwedzera magnesium pane yako yekurara tsika.
Mahombe madhayamita emaminerari anogona kukwikwidzana kuti apinhwe. Usashandise calcium, zinc, kana magnesium zvinowedzera panguva imwe chete.
Magnesium L Threonate Kukwidza kunogona kuvandudza manzwiro, kushungurudza kushungurudzika, uye kudzikisa kushushikana. Uyezve, rimwe bepa rakaburitswa mupepanhau rePain Physician rakawana kuti magnesium L-threonate inodzivirira uye inodzosera kukanganisika kwendangariro kwakabatana nekurwadziwa kusingaperi kweuropathic.
Mafomu emagniziyamu anonyungudika mushe mumvura akanyatso nyudzwa mumatumbu pane mafomu asinganyungudike. Zvidzidzo zvidiki zvakawana kuti magnesium mune aspartate, citrate, lactate, uye chloride mafomu anonwiwa zvakanyanya zvakakwana uye anowanikwa bioava kupfuura magnesium oxide uye magnesium sulfate.
Maitiro ari pasi pe350 mg zuva nezuva akachengeteka kune vakawanda vakuru. Mune vamwe vanhu, magnesium inogona kukonzera kushungurudzika mudumbu, kuda kurutsa, kurutsa, manyoka, uye mimwe mhedzisiro. Kana ikatorwa muhombe kwazvo (yakakura kupfuura 350 mg zuva nezuva), magnesium iri POSSIBLY UNSAFE.
Magnesium inokosha maminera ayo anobatanidzwa mune zvakawanda zvehutano hwako. Iyo National Academy yeMishonga inokurudzira kusapfuura 350 mg yekuwedzera magnesium pazuva. Kunyangwe iwe uri kutora magnesium kunatsiridza muviri wako chero nguva yezuva, chero bedzi uchikwanisa kuitora nguva dzose.
kuderedza kana kudzivirira chikafu chine calcium-maawa maviri asati kana mushure mekudya chikafu chine magnesium.
kudzivisa yakakwira-dose zinc inowedzera.
kurapa kushomeka kwevhitamini D.
kudya miriwo mbishi pane kuibika.
Magnesium inokosha mineral uye muviri unoishandisa mune 300 akasiyana metabolic maitiro. Ichowo chechina chakanyanya kuwanda mukati memunhu wemunhu. Muviri unoshandisa magnesium kweropa kudzvinyirira reganda, tsandanyama kukanganiswa, nerve chiratidzo kutapurirana uye simba kugadzirwa. Sezvo magnesium yakakomba zvicherwa, kushomeka kwayo kunogona kutungamira kuzvirwere zvakasiyana siyana, zvinosanganisira migraines, chirwere cheshuga-2 chirwere cheshuga, kusagadzikana kwemhirizhonga uye chirwere chemwoyo chakasiyana. Kunyange iyi mineral ichikwanisa kuwanikwa kubva kuzvakasiyana zvakasikwa zviwanikwa, zvinosanganisira miriwo, nzungu, mhodzi nematehwe, chetatu chevanhu vepasi rese vanotambura nekushomeka kwayo. Zviri, nokudaro, kuti vanhu vanowanzorayirwa kudya magnesium muchimiro chezviratidzo. Imwe yeiyo magnesium supplement iyo yakarongedza mukurumbira mukuru munguva pfupi yapfuura ndeye Magnesium L-threonate.
Muchikamu chino, isu tinokuudza zvese zviripo kuziva nezve Magnesium L-threonate uye nei uchifanira kuipedza. Saka, verenga mberi.
Tsvagiridzo inoratidza kuti Magnesium L-threonate yakachengetedzeka uye inoshivirirwa nemutumbi kana ikatorwa mune dosage yakawanda isingasviki 350 mg pazuva. Nekudaro, kuwedzera Magnesium L-threonate kudya kunogona kukonzera mhedzisiro, sekushungurudza, kurutsa, etc. Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge watora. Magnesium L-threonate, kana ikatorwa yakawanda, inowedzera magnesium kuvaka mukati memuviri, iyo inotungamira kumamiriro ezvinhu senge kushoma kweropa, kuwedzera kwemoyo, kunonoka kufema, nezvimwe. Saka zvinogara zvakanaka kubvunza chiremba wako usati watanga ne Magnesium L-threonate supplement. Mushonga uyu wakachengeteka kune vakadzi vane pamuviri uye vanoyamwisa pamwe nevana kana vakatorwa mune yakaderera dosage yakawanda.
Ngatitarisei mamwe mabhenefiti eMagnesium L-threonate uye edza kunzwisisa kuti nei iyi magnesium sosi ichifarira mukurumbira wakadai.
① Magnesium L-inotyisa Zvinobudirira Kurwisana ADHD
Chimwe chezvikonzero zvakakosha zvekuzivikanwa kweMagnesium L-threonate kugona kwayo kugadzirisa mwero wemagesium mukati meuropi. Sezvo munyu uyu uchinwiwa nemuviri zviri nyore, inzira inoshanda yekuita kuti magnesium isvike maseru ehuropi. Magnesium inoita basa rakakosha mukusimudzira hutano hwekuziva - inokwanisa kudzosera zviratidzo zvekukwegura kwehuropi, senge ADHD kana kusagadzikana kwekutarisira. Sezvo ADHD iri mamiriro anotora nguva kukura, vanhu havazive kuti vane ADHD kudzamara yasvika padanho kubva kwazvinoomera kubata. Magnesium L-threonate, saka, inoita basa rakakosha mukusimudzira hutano hwepfungwa, kunyanya mune vevakuru nekuchengetedza ADHD kure. (1). Zuva, Q., Weinger, JG, Mao, F., & Liu, G. (2016).
Is Icho Chiyeuchidzo Chinoshamisa uye Kufungisisa-Kuvandudza Kuwedzera
Kana vanhu vachembera, uropi hwavo hunotangawo kuderera mukukura. Izvi zvinoitika nekuda kwekurasikirwa kweiyo synapses uye zvinokonzeresa nezera-inoenderana nekuziva kuderera. Zvidzidzo zvekutsvaga zvakaitwa mumakore apfuura zvakaratidza kuti Magnesium L-threonate inosimbisa huwandu hweiyo synapses mukati meuropi, iyo, inotungamira kurangarira kwakanaka uye kuziva kwekubata. Mune mazwi akareruka, iyo magnesium yakapihwa naMagnesium L-threonate inogona kudzorera kuchembera kwehuropi uye saka, inowedzera hutano hwepfungwa, kunyanya mune vakuru.
③ Inobatsira Kurwisa Kushungurudzika uye Kufunganya
Kushungurudzika uye kunetseka zvava matambudziko akajairika. Iwo mamiriro ekunze ekusagadzikana akagadzirwa neazvino COVID-19 denda raita kuti nyaya idzi dzive dzakajairwa kupfuura kare. Zvidzidzo zvakaratidza kumwe kubatana pakati pe magnesium nekushungurudzika uye kunetseka. Sezvo magnesium inokanganisa nzira yetsinga, inogona kuita kuti munhu anzwe kugadzikana uye kusununguka. Saka, magnesium L-threonate inogona kuita basa rakakosha mukuderedza kushungurudzika uye kusagadzikana.
④ Inowedzera Bone uye Tsandanyama Hutano
Kushaikwa kweMagnesium zvakare kunosanganisirwa nemapfupa asina kusimba uye mhasuru pamwe nekumarara. Nekudaro, vanhu vanotambura neeficoporosis vanowanzorayirwa kutora Magnesium L-threonate sechinhu chinowedzera magnesium. Uyezve, uyu munyu unowanzorayirwazve sekurapa-kusunungura mushonga wekuvhiya.
N Magnesium L-Threonate Inobatsira Vanhu Kurara Zvirinani
Ongororo dzinoverengeka dzakaratidza kuti kuti munhu arara zvakanaka anofanirwa kunge aine huwandu hwakaringana hwemagesium mumuviri wake. Magnesium inogonesa iyo parasympathetic nervous system, iyo inozorodza muviri wese. Zvinotonyanya kukosha, magnesium inosangana neGABA receptors mukati memuviri uye inodzikamisa system yemunhu, nekudaro ichibvumira pfungwa nemuviri kuti unzwe wakasununguka. Magnesium L-threonate inovimbisa kuti kune yakakwana magnesium mukati memuviri kuona husiku hwekurara kwakanaka.
⑥ Mamwe mabhenefiti
Kunze kwezvibatsiro zvese zvataurwa pamusoro, Magnesium L-threonate ino shandiswawo kune zvimwe zvakasiyana zvinangwa. Uyu munyu unopihwa kuderedza marwadzo mushure mekuita hysterectomy. Inoshandiswazve kuregedza kurwadziwa kwechipfuva kunokonzerwa nemitsetse yega yega. Chekupedzisira, uyu munyu wakaratidzirwawo kubatsira nekurasikirwa kwekunzwa, fibromyalgia uye chirwere cheshuga. Vamwe vanhu vanotozvitora kuti vaderedze iwo cholesterol mazinga.
Kana iwe uri kutsvaga kukanda muMagnesium L-threonate yekuwedzera, iwe unoda yakavimbika uye yakavimbika mbishi yezvinhu mutengesi. Kana iwe uchitsvaga nzvimbo yekutenga Magnesium L-threonate poda muhuwandu, shopu kuCofttek. Iyo kambani inozivikanwa mukati meye biomedical indasitiri kune yayo yemuenzaniso yekuongorora kuyedza uye mhando yekutsvagisa kugona. Cofttek zvakare ine ruzivo manejimendi timu uye yekutanga-kirasi R&D timu ine nyanzvi dzinobva kutenderera pasirese.
Cofttek yakagadzwa muna2008 uye mukati memakore mashoma chete, kambani iyi yakazvigadzirira zita mumatanho akasiyana siyana, kusanganisira tekinoroji yekugadzira, kugadzirwa kwemishonga, bioengineering, chemistry chemistry, nezvimwe. Nhasi, kambani ine vatengi muNorth America, India , China neEurope uye mutemo wayo we 'Hwaro Hwakadzika, Mutengi Chekutanga, Kutendeseka Service, Mutual Kubatsirwa' kwaibatsira kuti igadzire vatengi vanofara kutenderera pasirese. Magnesium L-threonate yakapihwa nekambani inouya mumadhiramu e25 kgs uye chigadzirwa chimwe nechimwe chinogona kuvimbwa nemhando yepamusoro. Saka, kana iwe uchida Magnesium L-threonate poda muhuwandu, shopu.com.
Sezvo magnesium inoshanda padhuze necalcium, zvakakosha kuti uve nechiyero chakakodzera chemaminerari maviri kuitira kuti agone kushanda. Mutemo wakanaka wechigunwe ndeye 2: 1 calcium-to-magnesium ratio. Semuenzaniso, kana iwe ukatora 1000mg yecalcium, iwe unofanirwa zvakare kutora 500mg ye magnesium.
(1). Zuva, Q., Weinger, JG, Mao, F., & Liu, G. (2016). Mutemo weyakaumbwa uye unoshanda synapse density neL-threonate kuburikidza modulation ye intraneuronal magnesium concentration. Neuropharmacology, 108, 426-439.
(2). Mazreku, IN, Ahmetaj, H., Aliko, V., Bislimi, K., Halili, F., & Halili, J. (2017). Chiitiko cheCatalase (CAT), ALT uye AST mune akasiyana Masangano eSwitzerland Albino Mice Inobatwa neMutungamiri Acetate, Vitamin C neMagnesium-L-Threonate. Zvinyorwa zveKiriniki & Kuongorora Ongororo, 11 (11).
(3). Mickley, GA, Hoxha, N., Luchsinger, JL, Rogers, MM, & Wiles, NR (2013). Chisingaperi chikafu chemagnesium-L-threonate inomhanyisa kutsakatika uye inoderedza kudzoka kwega kwega kweyakagadziriswa kuravira kwekusada. Pharmacology Biochemistry uye Maitiro, 106, 16-26.
(5).Rwendo rwekuongorora egt.
(6).Oleoylethanolamide (oea) -iye mashiripiti wand ehupenyu hwako.
(7).Anandamide vs cbd: ndeipi iri nani kune hutano hwako? Zvese zvaunoda kuti uzive nezvavo!
(8).Zvese zvaunoda kuti uzive nezve nicotinamide riboside chloride.
(9).Palmitoylethanolamide (pea): mabhenefiti, muyero, mashandisiro, kuwedzera.
(10).Wepamusoro 6 hutano hunobatsira hwe resveratrol zvinowedzera.
(11).Wepamusoro mashanu mabhenefiti ekutora phosphatidylserine (ps).
(12).Wepamusoro mashanu mabhenefiti ekutora pyrroloquinoline quinone (pqq).
(13).Iyo yakanakisa nootropic yekuwedzera yealpha gpc.
(14).Iyo yakanakisa yekurwisa-kukwegura chinowedzera chenicotinamide mononucleotide (nmn).
Co-muvambi, yekambani manejimendi manejimendi manejimendi hutungamiriri; PhD inogamuchirwa kubva kuFudan University mune organic chemistry. Anopfuura makore mapfumbamwe ezviitiko mu organic synthesis munda wemushonga kemisitiri. Hupfumi ruzivo mukubatanidza kemesitiri, mushonga wemakemikari uye tsika synthesis uye manejimendi manejimendi.
Zvinoita kuti ndinzwe kurwara mumusoro mangu. Ndichaedza kudzikisa dosi
Ini ndakawedzera pfupi uye kwenguva refu ndangariro, uye ini ndinove ndakaenzana munzira dzakawanda. Ini zvakare ndinowana diki dopamine yekuwedzera uye diki testosterone yekuwedzera iyo inogara yakaenzana zvinoenderana uye zvishoma zvishoma kuderera. Kurara kunogona kukwidziridzwa zvakakwana kuita kuti maawa manomwe anzwe kunge 7 asi mag glycinate inondishungurudza chirevo icho kwandiri asi ini ndichakamira kumashure, vamwe, kurara kwekuwedzera.
Magnesium L-threonate (MgT) inobudirira micronutrient yekuvandudza kushanda, kutarisisa uye episodic ndangariro, kugona kwekuziva basa, uye kudzikisira kushushikana kwese nekushushikana.
Vamwe vanachiremba vanokurudzira kuwedzera 2000 mg yeMagnesium kurwisa kushushikana.
Izvo zvakanaka, kudzamara ndazoona kuti Magnesium L-Threonate inoshanda zvakanyanya kupinda mukati meBBB (Ropa, Brain, Chipingamupinyi). Izvi zvakayerwa kuburikidza nematanho eMagnesium mucerebral spinal fluid. Ndinozvitora kuti zviyeuke uye kuora mwoyo.
Howdy! Ichi chinyorwa hachina kunyorwa zvirinani zvirinani! Kutarisa pane ino posheni kunondiyeuchidza nezveangu wandaigara naye! Akaramba achiparidza pamusoro peizvi. Ndiri kuenda kutumira ichi chinyorwa kwaari. Anonyatsoziva kuti achave nekuverenga kukuru. Kutenda nekugovana!
Dzidziso inondibatsira kurara zvakadzama.
Ndanga ndichitora 600mg yeAlfa GPC, 300mg yeUridine, uye 2,000mg yeMag L-Threonate sehope dzangu dzakarara munguva pfupi yapfuura uye yanga ichishanda chaizvo. Zvinondiita kuti ndinzwe 10-25% zvakare kukotsira. Iniwo ndinokotsira nekukasira pandinomuka husiku.
zvirongwa zvekuvhiya zvechipatara
Ruzivo runobatsira. Ndine rombo rakanaka ini ndawana webhusaiti yako ndisingadi, uye ndinoshamiswa kuti nei tsaona iyi isina kuitika pakutanga! Ndakaisa bookmark.
About Magnesium L-Threonate uchishandisa nguva, 22% mangwanani uye 11% usiku inoshanda zvakanyanya.
Kana ndikatora zvakawandisa dzimwe nguva zvinogona kunge zvichipesana nekuziva, zviri nani mhedzisiro ndeye mushure memasvondo maviri akateedzana uye ini kazhinji handigone kuishandisa nemubudiriro wakawanda kungosimudzira mashandiro pane zvaunoda wega.
Ndinoona vanhu vazhinji vachitaura mhedzisiro senge kutemwa nemusoro, kushaya hope, kushaya simba etc.
Thiamine mubati wemagnesium, uye mwero wakakwira wemagesium unogona kudzikisa thiamine, uye vica-versa.
Edza kutora thiamine (B-1) pamwe kana mushure mekuwedzera kwemagesium, uye ona kana mhedzisiro ichiri kuenderera.
Izvo zvakanaka, asi kana iwe ukaenda navo tanga zvishoma. Kana iwe uchinge uine matambudziko nekurara uye grogginess, mag threonate inogona kuwedzera iyo pakutanga. Ndingadai ndisingatombotanga nemavambo ekurudzira muhombodo, inova 1000 mg 2 maawa usati warara kwevhiki rekutanga. Sezvo izvi zvingangodaro zvichiri kukuchengetedza iwe mumhutu kwechinguva chidiki.
Ini ndinotora 1-2gs ndisati ndarara uye pamwe imwe 500mg kapu mangwanani kana ndikanzwa kugwinha.
Zvinonakidza kuti uri kuwana mifungo kubva kuchinyorwa chino uyezve kubva kuhurukuro yedu yakaitwa panzvimbo ino.
Magnesium L-Threonate inokonzeresa kubuda kwemagesium kubva kunzvimbo yekunze kune iyo nzvimbo yeitracellular yenzvimbo yetsinga. Izvi hazviitike neimwe magnesium-munyu.
Inogona kubatsira kurara nekukurumidza saka 1 awa usati warara inokurudzirwa. Bhodhoro rako rekuwedzera rinogona kuda mapiritsi matatu kana mana pazuva. Izvi zvinodaro nekuti magnesium threonate ine bulky, chikamu chinotyisa chemamorekuru chakakura. Patsanura muyero kuburikidza nezuva kuti uwedzere kunwa asi pamwe ungaronga kuti uve nekudyiwa kukuru mushure mekudya kwako kwekupedzisira.
L-Threonate inokanganisa huropi zvakananga zvakasiyana nemamwe marudzi emagesium.
Sezvazvinoenda nezvinhu zvakawanda zvine mutsindo wakanangana nehuropi panogona kuve nenguva yekuchinjika kwazviri saka id ipa nguva.
Izvo zviri kune vese, zvirimo zviripo pane ino saiti webhusaiti zviri chaizvo zvinoshamisa kune vanhu ruzivo, saka, chengetedza iro rakanaka basa vamwe.
Iko kurara pamwe nekukurudzira pamusoro pechero chero ikozvino kushaya hope kwaungasangana nako. Chingozvitora mangwanani uye nedosi yakadzikira-pakati kubva zvino zvichienda mberi.
Kana iri iyo Mag-L-Threonate inoenda, kunzwisisa kwangu ndekwekuti iyo L-threonate mutakuri wepamusoro uye inofambisa huwandu hwakanyanya hwemagesium zvakananga muuropi umo inogona kushandiswa nemauroni? Zvichida zvidzidzo zvakaratidza kuti ichi ichokwadi. Handizive kana iko kungori hype kana kwete zvakadaro. Ini ndingasarudza kutora L-threonate kana ndikakwanisa kuiwana yakawanda, zvikasadaro ndiri kungonamatira nekachelate.
Pamwe magiramu maviri e magnesium L-threonate, achiburitsa 2mg ye elemental magnesium.
Threonate fomu yakanyanya huropi yakanangana uye pamwe iri kure zvakanyanya kushanda mukusimudzira uropi magnesium zvemukati kunyangwe iine mashoma chaiwo maginesi mairi.
Ndakatanga kutora chigadzirwa cheMagnesium L-Threonate husiku usati warara uye wow - mushure memazuva mana kana mashanu ndakatanga kuona kuvandudzwa kudiki mukurangarira, kuchengetwa kwedata rakasiyana pabasa, uye mushure memavhiki akati wandei, kuvandudzwa kukuru kwandaigona kuyeuka mazita uye chokwadi kubva makore apfuura. Ndisati ndatora izvi, ndakanetseka nekurangarira zvakapusa uye zvidiki zvinhu uye zvaive zvine chekuita nezvakakwana zvekuti ndakataura nePCP yangu uye ndikatoona Neurologist uyo akandiwana ndine "hushoma" hurema hwekuziva uye akatosvika pakundizadza nhamba yemiedzo kutonga kunze kweAlzheimer's.
Ndiri kutora muyero wakakurudzirwa wemacapsule matatu ayo anopa 144 mg yeMagnesium L-Threonate husiku. Uku kwave kuri kuchinja hupenyu kwandiri.
Imwe yakanaka divi mhedzisiro iyi inoita kunge yakavandudza kurara kwangu uye ini ndinowanzo rangarira zviroto zvangu izvozvi.
Ndanga ndichitora poda yeMagnesium L-Threonate kwemwedzi ingangoita gumi ikozvino, 10 - 1.0g zuva nezuva. Ini ndinoishandisa seyokurara yekubatsira, uye inoshanda zvinoshamisa. Handikwanise kuti ndacherekedza mhedzisiro kunze kweizvozvo.
Magnesium L-threonate inoshamisa. Unogona google zita rayo reMagtein. Inojekesa hutsi hwehuropi, inoderedza kushushikana, inobatsira iwe kurara, inoita kuti uve nehungwaru, uye inobatsira nekuora mwoyo. Vabereki vangu vese vakakwanisa kubva pamishonga yekudzvinyirira nekuchinjira kuMagtein. Ini ndinoshandisa zuva nezuva uye ndingave ndisipo.
1g-2g awa imwe usati warara. 500mg yekushandisa nguva yezuva, kana zvichidikanwa kushushikana. Icho chimwe chezvinhu izvo zvinokurova chaizvo kana zvapera, zvichireva kuti hazvina kunaka mukugadzira uchiri pairi asi kuti chinozorodza pfungwa dzako uye chinobvumira zvinodhaka zvinoita zvinogamuchirwa zvinodzivirira kuti zvishande zvirinani kana Mg atoita basa. Izvi zvine musoro here? Ndosaka usati warara wakakura kwazvo, unokonzeresa kuti umuke wakapa pfungwa dzako zororo kubva mukusimudzira. Migumisiro inowedzera, asi zvakashata, ndakanyatsonzwa musiyano mangwanani iwayo mushure mekunge ndatanga kuitora, zvechokwadi.
Yakawandisa magnesium inokonzeresa dzakasununguka zvituru. Kune vazhinji vedu, izvo zvinodarika 200 mg pazuva. Vamwe vanhu vanogona kushivirira pamusoro pe500 mg yekuwedzera magnesium isina matambudziko.
Iyo yakakurudzirwa dosi kwandiri ndeye 144 mg ye elemental (yakachena) magnesium pazuva. Vamwe vanhu vanotsumwaira zvishoma pakutanga, vamwe vanoona kuwedzera kwekunzwa kweropa kuyerera mumusoro, nepo vamwe vanogona kurwadziwa nemusoro. T Kana iwe uri kutora magnesium yekuzvimbirwa, iwe ungangoda kuedza kuenderera neyako yazvino dose uchiwedzera iyo Mg Threonate.
Kana iwe ukagadzira dzakasununguka zvituru, cheka kumashure pane yako yapfuura fomu Mg.
Magnesium L-Threonate - chii chave chiri chiitiko chako?
Pane chero munhu pano anga achitora Magnesium L-Threonate sekuwedzera? Chii chave chiri chiitiko chako?
Wanga uine nguva yakareba sei uchitora uye yakawanda sei?
Zvakanga zvakaita sei usati watanga kuitora, iwe uchiri pairi, uye mushure mekumira kuitora kana wakazviita?
Ini ndinofunga manejimendi weiyi saiti ari kunyatso kushanda nesimba mukutsigira webhusaiti yake, nekuda kwekuti pano zvinhu zvese zviri zvemhando yepamusoro data.
Ini ndinoona kuti Magnesium L-threonate yakanyanya kutonhora uye yakatarisana nemhedzisiro, nepo glycinate iri yekuzorora kwemuviri.
Zvakakodzera kuyedza zvese mumaonero angu.
Threonate mune iyo amino-acid fomu yakaratidzirwa kuita seAcetylcholinesterase inhibitor. Saka kana iwe uri choline inonzwisisika uye ukaona kushushikana kwepfungwa kana chero zvakashata zvinokonzeresa kubva kune zvinowedzera seHuperzine A, Alpha GPC, mega-doses yemafuta ehove, saka ndinonyara ndakananga kuMag Glycinate.
Nekuda kwemubhadharo, ndakarega kuedza magnesium l-threonate kwemakore.
asi kwandiri, Inovandudza hope dzangu, chinhu chikuru ndechekuti mwero wekudzikama wandinogona kuzadzisa zuva mushure mekutora hauna kufananidzwa.
Handina kumbobvira ndawana chero yemanzwiro / kushushikana kunobatsira kubva kune mamwe marudzi e magnesium akaita glycinate, asi pachezvangu ndinoawana kubva ku l-threonate.
Magnesium L-threonate inogona kunge iri yakakodzera magnesium fomu kwauri kana iwe uri kutsvaga kusimudzira hutano hwehuropi kunyanya.
Kunyangwe ichigona kuwedzera huwandu hwemagesium mumuviri wese, mhedzisiro inogona kutosimba muuropi.
Izvi zvinhu zvinoshanda, kunyanya kwenguva yekurara uye mhando.
Ndakaedza mamwe mafomu eMg uye ivo vanongondipa kumhanya.
Ndatora Melatonin, ZMA, Skullcap, 5-HTP, GABA, Gingko, Valerian, PhosphatidylSerine, hapana inoshanda zvinowirirana uye zvinobudirira seL-Threonate fomu yeMg.
Magnesium L-Threonate Zvakaitika?
Ini ndichangobva kutenga imwe Magnesium L-Threonate uye handina kana chimwe kunze kwezviitiko zvakakura nazvo. Kusanyanyo kushushikana, kushoma hutsi hwehuropi, ndinonzwa senge 'ini' mune imwe pfungwa, nezvimwewo ini ndinotenderedza kutenderera 1-1.5g yeiyi pazuva.
Ndiri kushamisika kana paine akambove nezviitiko zvakafanana kana zvakasiyana neiyi fomu yeMagnesium?
Magnesium L-Threonate inoita kuti ndidzikame uye inobatsira kurara kwangu.
VHURA LABEL TERI YEMAGNESIUM L-KUZVIMBISA MUVARWERE NE DEMENTIA
MuUnited States, mune fungidziro inofungidzirwa kuva mamirioni mashanu nemakumi mashanu ezviitiko zveAlzheimer's Disease (AD), iine AD nemamwe madhenda anokanganisa vangangoita 5.2 muvatatu vakuru vakuru. Nekuwedzera kwemari uye kwemutoro mutoro wekuchengetwa kwevarwere, kutsvaga kurapwa kwakachengeteka uye kunoshanda kwakakosha. Kutsvaga kwekutsvaga pamusoro pekuziva kwekukonzeresa kweMagnesium L-Threonate (MGT) inoratidza kuti kuwedzera kunogona kubatsira vanhu vane AD. Kunyangwe yakaganhurirwa, iripo mhuka uye yemunhu kiriniki yekuyedza dhata maererano neyeural uye yekuziva mhedzisiro mushure meMGT yekuwedzera, tsananguro yemagetsi yeMGT mhedzisiro iri kutanga kubuda, kusanganisira kukwidziridzwa kweNMDAR yekuratidzira nzira. Yazvino yakavhurika tsamba yekuyedza yakaongorora mhedzisiro yeMGT yekushandisa mune varwere vane hunyoro kusvika pakati nepakati dementia. Vane gumi nevashanu varwere vakawana 1F-FDG-PET imaging, kuongororwa kwekuziva, uye ropa rinodhonzwa pakutanga uye pamasvondo gumi nemaviri ekurapwa kuitira kuti vaongorore mhedzisiro yeMGT yekuwedzera pane hippocampal uye prefrontal cortex inopindirana kugona kwekuziva kusanganisira Executive basa, kutarisisa, kumhanyisa kumhanyisa , kutaura kwakatsetseka uye ndangariro. Kuongorora kwekuziva uye kukweva ropa kwakaitwawo mushure memavhiki masere eMGT kurega. Zviwanikwa zvakaratidza shanduko yakakosha mudunhu recerebral metabolism pamwe nekuvandudzwa kwepasi rose index yekuziva kushanda mune iyo yakazara sampuro mushure memasvondo gumi nemaviri ekurapwa kweMGT. Yakawedzera tsvuku yeropa maseru emagesium mazinga aibatanidzwa nekuvandudzwa mukuzara kwekucherechedzwa uye kushanda kwemasimba mune vamwe asi kwete vese varwere. Mahombekombe akakura anotongwa emakiriniki miedzo inofanirwa kuongorora MGT seyakanaka, inowanika nyore, uye inodhura ekuwedzera ekurapa kune vanhu vane AD.
Kubudirira uye Kuchengetedzwa kweMMFS-01, Synapse Density Enhancer, yekurapa Kusaziva Kukanganiswa muVakuru Vakwegura: Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial.
Izvo hazvina kunetsekana kutsvaga chero nyaya pamambure kana ichienzaniswa nemabhuku, sezvandakawana ichi chinyorwa pawebhusaiti ino.
Zvikuru! Chinyorwa chayo chaicho chinoshamisa, ndine pfungwa yakajeka yakajeka maererano nechinyorwa chino.
Magtein (L-threonate) Mubvunzo Wechipimo？
Mhoroi, ndiri kushamisika nevanhu vakashandisa Magtein kana L-threonate munguva yakapfuura, iwo madosi avo aive pazuva, kunyanya kana vakatenderera pakati pemamwe marudzi emagesium.
Parizvino, ndiri kutora ~ 3600mg yeglycinate pazuva (1800mg mangwanani, 1800mg husiku). Zvinoenderana nechiratidziro, icho chiri pamusoro pe100% kukosha kwezuva nezuva kwemagesium, asi ndiwo mwero wandinonzwa kufara pauri, sezvo uchibvisa makrampasi mazhinji uye mhasuru.
Ndiri kushamisikawo, sezvo 2000mg yeMagtein iri chete 36% zuva nezuva kukosha kwemagesium, uye 2000mg Magtein ndiyo MAXIMUM inokurudzirwa pazuva, zvinoita here kuti uwane magnesium yakakwana kubva kuL-threonate, kana vanhu vanoshandisa mamwe marudzi e magnesium mu Kuwedzera kune L-threonate, kana uchitora L-threonate?
Ndatenda nerubatsiro. Kutanga nguva kuyedza L-threonate kwandiri.
Ndanga ndichitora ND's Magnesium L-Threonate poda kweinenge mwedzi gumi ikozvino, 10 - 1.0g zuva nezuva. Ini ndinoishandisa seyokurara yekubatsira, uye inoshanda zvinoshamisa. Handikwanise kuti ndacherekedza mhedzisiro kunze kweizvozvo.
Kunobva Naturals Magnesium L Threonate? Magnesium L Theronate ine patenteti saka kana iri chaiyo Mag. Iyo ingave iriyo fomula zvisina tsarukano yechiratidzo chiri kuitengesa.
Magnesium l inotyisa?
Sekuziva kwangu, l-threonate fomu inosimudzira neurotransmission yekujekesa uye kutarisisa. Glycinate yemhasuru tension / cramp uye yeropa kudzora mutemo. Citrate yekudzikamisa uye inogona kubatsira neyakajairika.
Ini ndaizowana citrate yezviratidzo iwe zvawatsanangura.
Magnesium inokosha electrolyte mumuviri wako saka itore imomo mazuva ese.